Skayler Ala. actress American cinema nethelevishini
Skayler Ala uqale career oyibamba ekuseni kakhulu futhi namanje uvele amabhayisikobho, imidlalo ewuchungechunge ye-TV, ehilelekile amaphrojekthi ahlukahlukene kanye nemibukiso, kanye ukucula. Empeleni, igama actress kuyinto Skyler Anna Shuster. Futhi isiphetho sakhe kangangokuthi ngisho zisencane, yena okunenkanyezi ifilimu yakhe yokuqala. Akumangazi ukuthi eminyakeni engu-15-ke nhlobo ukunakekelwa kwabazali, waqala ukuphila ngokuzimela.
Isifinyezo biography of actress
Skyler Anna Shuster, kangcono eyaziwa ngokuthi Skayler Ala, yazalwa ngo-Los Angeles (California), October 14, 1986. Akaphishekeli ukukhumbula ukuthi wayekade ephuphile njengoba ingane kwenkonzo actress sika, emuva lé ngawo-8 ubudala, waqala ukuvela. Ehlukile futhi kwakungenakwenzeka, ngoba ibhapathizwa Skyler - umlingisi ezaziwayo, kinoveteran Dzhon Voyt.
Lapho wanquma ukwenza DEBUT yakhe njengoba umqondisi-ke, kusobala, lapho izinkanyezi ku-movie ne-TV ngokuthi "Tin Soldier" (The Tin Soldier) goddaughter yami kancane. Kusukela ekuqaleni imisebenzi yayo isiqondiso umlingisi sika. Obalulekile umsebenzi ekuseni Skayler Ala endimeni ifilimu kwaba ngo ezimele horror ifilimu eyayinesihloko esithi "Whisper" (1995), lapho wadlala isipoki intombazane. Ngemva kwalokho Skyler akakwazanga ukumvimba ukuqopha. Wawunodonga izindima ingane ahlukahlukene amafilimu theatricals. Wabuye udlala asiwona umdlalo wethelevishini, amahlaya, imikhiqizo ithelevishini kanye nemibukiso. Kwakuphakathi kwezinqumo le misebenzi, kanye izindima eyinhloko. Kodwa indima yakhe lezinkanyezi, wanikezwa ngo-2007, lapho umdlalo uvele movie ithelevishini "bratz" njengoba Chloe. Young actress sibonga umsebenzi walo uphoqe kungakabiphi ukuzimela. Lapho ngineminyaka engu-nanhlanu eseneminyaka nhlobo ukulawula komzali nokunakekela. Ngo-2003, Skayler Ala wavula inkampani yakhe ukukhiqizwa ngokuthi Skye Ezokuzijabulisa.
Filmography Skayler Ala
Ngo umsebenzi oyibamba wezokushushiswa actress a amafilimu ambalwa egqamile futhi izindima, kodwa ngenkuthalo asuswe iminyaka bokuqala. Kuze kube manje, Skyler Filmography kuhlanganisa amafilimu mayelana amabili njengoba yesibili, futhi ne izindima eyinhloko. Yaqala kinodeyatelnost yayo ngokwesaba okukhulu "Whisper" (1995). Kwabe sekulandela ahlekisayo "Prince and the Surfer," lapho ababukeli wabona Shay eseyintombazane nge inja. Ngemva komsebenzi wakhe kumabonakude ukuthi uchungechunge oluthi "Ibhizinisi Lasekhaya" (2002 - 2003). Ngo-2003, Skayler Ala namanje wadlala indima ingane black amahlaya ngokuthi "Sebudzaleni". Futhi, actress ivela ahlekisayo umndeni "Superdetki: 2 Geeks" (2004), ochungechungeni "Veronica Mars," "Ubumpunga sika Anatomy," "Cabanga njengesigelekeqe", "Berkeley", "The Legend of Simon umlumbi". Ekugcineni ngo-2007, umdlali wathola indima enkulu, okuyiwona futhi uzoqhubeka ukuqaphela izethameli. Lokhu indima lezinkanyezi i-Shay kwaba indima le ntombazane Chloe movie "bratz". Ngemva kwalokho, actress Skayler Ala yamafilimu abanye: Umdwebo "Ukulinganiselwa engaphandle", "Abaphenyi", isizini yesithathu neyesine ka "I wayeyisazi izingane."
"Bratz." Le filimu, Yaduma Skayler Ala
Ngo-2007, Screens out umndeni ahlekisayo "bratz", lapho omunye izindima eziyinhloko eyadlalwa actress Skayler Ala California. Lena indaba amantombazane amane evile eminyakeni eyishumi nambili, abangane esikoleni, ngubani inselelo umongameli walesi sikole, okuyinto uhlukanisa zonke amaqembu, kuye ngokuthi isigaba. Enye intsha iye sibambe Heroine Shay - Chloe. Ngamunye abangane bakhe, uya esikoleni esiphakeme, ngathola okuthile kuwo wonke umuntu. Chloe - obambe iqhaza kwezemidlalo, yena eyingoduso ebholeni.
Izethameli kanye baxgeki bayaziswa kahle abadlali umsebenzi, ukudlala indima eyinhloko. Skayler Ala futhi babhekana nazo intombazane indima-isiphungumangathi owangena aphume ebhokisini lakhe. Ngo indaba protagonists unquma iqhaza yonyaka ithalente show. Kuyo njalo iwine umuntu kuphela eyodwa - Meredith, indodakazi umqondisi esifanayo sika, okuyinto abaphikisi. Intombi isinqumo ukulungiselela ekamelweni elikhanyayo somlilo. Kodwa Meredith Kwakungafanele aphazanyiswe la mantombazane abaye bahlanganyela futhi nakakhulu uwine umncintiswano. Uyazama ngokungalugcini kuyena lolu daba ukubaphoqa ukuba ayiyeke le umncintiswano. Meredith waqoqa ukwaziswa ezahlukene mayelana ugly zonke nezintombi ezine. Ekuqaleni, iletha yokungezwani phakathi Chloe nabangane bakhe, kodwa ke namanje beze ndawonye futhi ukuya kuleli emncintiswaneni. Injabulo wayengeyena abangane abaningi nakathumba. "Bratz" - ifilimu, kulandele Shay stla eyaziwa ngokuba ubuntu bakhe.
ukuphila Umlingisikazi komuntu siqu
Skayler Ala omunye walabo abadlali abangathandi ukukhuluma ngomndeni wakho futhi ukuphila siqu. Ngenxa ukuthandwa hhayi elikhulu kakhulu actress ulwazi oluncane kakhulu ngalokho uhlala Skyler isethwe. Kasibili lutho mayelana nomndeni, nabo actress uhlala ezaziwayo. Ingabe ikhona umyeni, umngane, izingane ziye Skayler Ala? ukuphila kwakhe siqu - udaba avaliwe, okuyinto ukhetha ukuba athule.
I okuvusa usinga engcono. uhlu lwamabhayisikobho
Dzhoffri Barateon. Umlingisi Dzhek Glison futhi ubuntu bakhe
Maria Ivashchenko: Biography, umsebenzi, impilo siqu
Top ukuzidela movie Russian kanye angaphandle
Ukushintshashintsha kokuhlanganiswa, ukuguquguquka nokuguquguquka
Smartphone EMKHUNJINI Benefit A3: ukubuyekezwa, izincazelo, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Ngubani Erik Prince? inkampani Private lempi Blackwater
Indlela ukupheka sikadali yengulube kanye isobho? Amacebo eziwusizo
Dream Ukuhunyushwa: umama. Kungani ukuphupha ngani umama?
Welding umshini inverter - yimuphi ongcono? izici Uqinile, amanani
Umdlalo wekhompyutha "Imimoya Emnyama 2. Hunter Grove": incazelo nokuhamba kwendawo
Uyini "Riviera" - kwaziwe yibo bonke
Umthelela kwezomnotho njengendlela wengxenye omuhle Dynamics emnothweni